प्रदेश १ मा माओवादी केन्द्रले तोक्यो जिल्ला सहइन्चार्ज र संयोजक, क कसले पाए जिम्मेवारी ? - Baikalpikkhabar
प्रदेश १ मा माओवादी केन्द्रले तोक्यो जिल्ला सहइन्चार्ज र संयोजक, क कसले पाए जिम्मेवारी ?
२२ भदौ, विराटनगर / नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश १ का १४ वटै जिल्लामा सहइन्चार्ज र संयोजक तोकेको छ । माओवादी केन्द्र प्रदेश १ कमिटीको बैठकले जिल्ला सहइन्चार्ज र संयोजक तोकेको हो ।
मङ्गलबार, २२ भदौ, २०७८, बिहानको ०९:१२ बजे